Peony "Sarah Bernard": nkọwa na ọdịiche dị iche iche nke iche iche (na foto) - Mkpụrụ ubi - 2019
Anyị na-etolite "Saru Bernard" n'ubi ahụ: atụmatụ nke ịkụ na ịchekwa ihe dị iche iche
Peonies - okooko osisi mara mma nke ahịhịa nke herbaceous perennials. Ndị na-elekọta ugbo na ndi ore fulawa na-ahụ ha n'anya n'ihi nwa osisi lush na-egbuke egbuke, okooko osisi dị ogologo. Osisi nwere ọtụtụ iche - ihe karịrị puku ise. Otu n'ime ha - pion a kpọrọ "Sarah Bernard" ka a ga-atụle n'isiokwu a.
Ebee ka kụrụ peony
Ọkụ na ebe
Ụkpụrụ osisi na usoro ozuzu
Ezi nlekọta nke iche iche
Olee otú mmiri
Esi esi nye mmanu
Otu esi edozi nsogbu
Ụdị nke oge a
Ụdị ngwakọ a mara mma nwere ihe na-akpali mmasị site na akụkọ ihe mere eme. Ọ bụ onye France a ma ama kpọpụtara ya na Pierre Louis Victor Lemoine. Ọ bụ ọrụ kachasị mma nke ọkachamara a - ọtụtụ ụdị peonies na lilacs - taa bụ ndị ọkachamara nke nkà mmụta ala.
Idu n'etiti ọtụtụ ụdị nke peonies bụ iche iche nke osisi, nke osisi na nke dị warara. Ọzọkwa, peony ọgwụ na-ewu ewu maka ọgwụ ọgwụ.
Ihe mere na 1906 Pierre Lemoine aha ya dị iche iche dị iche iche n'aha aha obodo ya a ma ama, onye na - eme ihe nkiri Sarah Bernard, otu onye nwere ike ịkọ. O yikarịrị ka ya, dị ka ọtụtụ ndị French nwere ọgụgụ isi, gara ọrụ ebe otu onye na-eme ihe nkiri na-egwu egwu, egwu na egwu ya merụrụ ya. Ya mere, achọrọ m inye ya aha ya na otu n'ime ụdị ndị mara mma, nke ọ na-eri n'onwe ya.
Dị ka Sarah na-enwu enyo, peony, nke a kpọrọ aha ya, na-adọta mmasị mgbe nile, ọ bụrụgodị na ọ bụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ okooko osisi, ma ọ bụ ụkpụrụ nke ọrụ ubi. Maka àgwà ndị a na-achọ mma, a na-enye ifuru ahụ onyinye Award nke Ụlọ Ahịa Royal Horticultural Society (RHS). Taa, pion dịgasị iche iche "Sarah Bernard" ifuru flowerers na breeders n'usoro n'etiti kacha mma pink iche.
Ị ma? Na omenala ndị Chinese, Pion malitere iji ya mee ihe n'oge ọchịchị nke usoro Qin na Han (ihe dika 200 BC). Otú ọ dị, ọ gaghị eto onye ọ bụla chọrọ, ma ọ bụ naanị ụmụ amaala bara ọgaranya nke China. A machibidoro ndị Chinese nkịtị ime otú ahụ..
Ịmata na peony "Sarah Bernard" malitere site na nkọwa nke ụdị dị iche iche. Ọ ntozu ntozu - Okooko osisi na-egosi mgbe ọtụtụ ụdị dị iche iche amaolarịrị. Osisi okooko osisi "Sarah Bernard" nwere otutu. Osisi ndị ahụ buru ibu, ha nwere dayameta nke 20 cm, otu.
Mee ogologo oge (ruo mita n'ogo) ike siri ike na ịnọ n'ụlọ. Petals na okooko osisi ọkara-abụọ na terry. Ụdị njirimara kachasị dịgasị iche iche bụ pink pink na ókèala ọlaọcha. Taa, na-egosipụtakwa ụdị nke ọcha, ọbara ọbara, ude, agba aja aja. Ogologo oge peony okooko bu ihe dika otu ọnwa na ọkara.
Ihe dị iche na nke a bụ na ọ dịghị atụgharị edo edo, ma nọgide na-ama mma n'oge okpomọkụ, na ọdịda nke crimson. Ha bụ otu ihe ahụ dịka okooko osisi, nnukwu, nkesa, emeghe. Na agba - agba ọchịchịrị. Osisi na-anabata oyi oyi. Maka nkasi obi na ndu ya, ọ ga-adị mkpa iji belata epupụta na ọdịda.
N'ihe odide ala, a na-eji Sarah Bernard peonies mee ihe na ridges na mixborders. A na-akụ ha na otu. Jiri n'okpuru mkpisi na ihe osise na-edozi.
A na-ahụ Peony site na mfe ya. Ekwuru na ọ nwere ike ibu ibu na-enweghị nsogbu na nlekọta pụrụ iche maka afọ 30, ụfọdụ narị afọ na-agbakwa ruo 80. Ma iji mezuo ihe ịchọ mma nke peony ahụ, ọ dị mkpa iji hụ ihe ụfọdụ chọrọ ma mee ka ihe ọkụkụ ahụ nwee mmasị n'oge ịkụ ihe ma lekọta ya.
Jiri nlezianya na-ele anya n'ubi mara mma. I nwekwara ike ịmepụta ogige okooko na-aga n'ihu: na oge opupu ihe ubi, a ga-eji ogwu nke peonies chọọ ya mma site na ndị na-agba chaa chaa, irises, crocuses; ke ndaeyo - astilbe, lily, pelargonium, godecia, zinnia, petunias, na n'oge mgbụsị akwụkwọ ha ga-eji phloxes, asters, chrysanthemums dochie ya.
Peony - osisi nke hụrụ ìhè. Ya mere, maka ọdịda ya ga-ahọrọ ebe dị mma ebe ìhè onyinyo pụrụ ịda nanị n'ehihie. Ọ bụrụ na ị na-akụ osisi ohia na ndò, ọ ga-agọnahụ gị ụtọ nke ịmasị okooko osisi ya - ọ gaghị ahapụ ha.
Ala kacha mma maka akuku ga-abụ obere acid loam. Ọ bụrụ na ụrọ na-ebupụta n'ala nke ị na-eme atụmatụ ịkụ mkpụrụ osisi ahụ bụ Sarah Bernard peony, a ghaghị itinye ájá na ya. N'ihe banyere oke aja ị chọrọ iji mee ụrọ.
Ala nwere nnukwu pH tupu o kpoo ifuru kwesịrị ịbụ nkume ala ala iji nweta ezigbo acidity (300-350 g / 1 sq. M). Mmiri, swampy, ala acidic, na ihe dị n'ime ala mmiri bụ ihe ndị na-eme ka a kụọ pions.
Ị ma? Na Gris, ha kwenyere na peony nwere ike inye aka na ọrịa 20, n'ihi ya, a ga-etolite ya n'ogige nile nke ebe obibi ndị mọnk. Ruo mmalite nke narị afọ nke 19, a na-eji osisi a eme ihe nanị dị ka ọgwụ na dị ka ihe si esi nri.
A na-agbasakarị peony na-ekewa, na-ekewa ohia na ndina. Nke kachasị mfe ma dị irè - nkewa nke ohia ahụ, nke a ga-eme n'August na Septemba.
Iji kpoo pion n'ụzọ dị otú a, a ga-egwupụta ọhịa ahụ. Mgbe ahụ, bepụ n'ebe dị anya nke 10 cm si mgbọrọgwụ. Saa mgbọrọgwụ nke ọma n'okpuru mmiri na-agba agba na ebe na ebe gbara ọchịchịrị maka ihicha na germination.
Maka ọdịda ị ga-ahọrọ delenka, nke nwere abụọ ma ọ bụ atọ buds na mgbọrọgwụ ruo 10-15 cm n'ogologo. Tupu etinye ya n'ala, ọ ga-achọ disinfection. Akpa, ị ga-etinye ya maka ọkara awa n'ime akpa na ngwakọta garlic ma ọ bụ ngwọta na-adịghị ike nke potassium permanganate.
Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-etinye nkewa maka awa 12 na ngwọta nke "Heteroauxin" (1 mbadamba / 10 l nke mmiri). Mgbe o wepụsịrị ihe ọkụkụ ahụ site na ngwọta ahụ, a ghaghị ịmịchaa ya nke ọma, na ngalaba ahụ kwesịrị ikpuchi ya. Ma naanị mgbe nke ahụ gasịrị, ị ga-aga n'ihu na ọdịda.
Na ala nke oghere ọdịda itinye ájá. A na-eme ka onye na-ehichapụ ya dịkwuo n'ime ya ka ebe dị anya site na buds ruo n'ala abụghị ihe karịrị centimeters (mkpịsị aka abụọ ma ọ bụ atọ), nke dị omimi ma ọ bụ ike na-adịghị ike nwere ike ịbụ ihe mere osisi ahụ ji jụ oge ntoju.
Akuku ihe eji etinye ala na mmiri. Ka osisi ahụ wee nwee ike imebi ya, ọ ghaghị imejupụta ya na 5-7 cm oyi akwa nke peat. Na oge opupu ihe ubi, mgbe acha uhie uhie pụtara na-eto eto ntakịrị, mulch nwere ike wepu. Ebe ọ bụ na bushes na-agbasa agbasa n'ọtụtụ ebe, ebe dị n'agbata oghere ọdịda aghaghị ịdịkarịa ala otu mita.
Mgbe a na-atụgharị ya na-adịgide adịgide, a na-edozi olulu mmiri dị 60 x 60 x 60 cm kariri ọkara ya jupụtara na ngwakọta ala, nke a kwadebere site na peat, ụwa, ájá, humus. A na-ewere ihe niile dị nha.
A na-etinye olulu ahụ na nri nke ọkpụkpụ (0,5 n'arọ), superphosphate abụọ (0,4 kg), ígwè sulphate (otu tablespoon), osisi ash (1 l), potash (otu teaspoon). A na-ekpuchi ala na-abaghị uru n'olulu ahụ. Ọdịda compacted na plentifully mmiri.
A ga-atụ anya okooko osisi mbụ mgbe a ga-atụgharị ya ka afọ abụọ gasịrị.
Ọ dị mkpa! Ọdịda na transplanting peony ga-eme na n'oge mgbụsị akwụkwọ.
Peonies chọrọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nlekọta. Ihe ndi ozo a choro ime ka ha na ha bu mmiri, igbutu ahihia, imepu ala, fatịlaịza, igbutu maka oyi.
Ebe ọ bụ na osisi "Sary Bernard" dị ike, ha adịghị ada, na-akụda ha na sediments. Ya mere, n'adịghị ka ọtụtụ ndị ọzọ, ịkwado na nkwado adịghị mkpa.
A naghị achọ pion ugboro ugboro. N'ime oge mgbe a na-ekekọta ya, enwere ọganihu, ọ ga-ezuru osisi ahụ iji nweta mmiri otu ugboro n'izu n'oge okooko. Oge ọzọ ị nwere ike ịṅụ mmiri ugboro ugboro.
Ịgbara kwesịrị ịdị ukwuu - bọket atọ ma ọ bụ anọ na otu ohia. Ọ bụ ihe amamihe dị na mmiri na mgbede ka mmiri mmiri wee ghara ịkpasu ọkụ na epupụta petals. Mgbe ogbugba mmiri ga-ewepụ.
Ọ bụrụ na a kụrụ osisi ahụ n'ala kwesịrị ekwesị dịka ndụmọdụ nile dị, mgbe ahụ na afọ mbụ, na ọtụtụ afọ ndị sochirinụ, ọ dịghị mkpa ka nri fatịlaịza.
N'ọdịnihu, a ga-achọ peonies ifanye mmiri ugboro atọ n'afọ: na oge opupu ihe ubi, n'oge okpomọkụ na ụbịa. N'etiti etiti June, a ga-amanye osisi ahụ na ngwọta nke mullein ma ọ bụ nnụnụ nnụnụ (3 lita kwa ohia).
Na mbido ụbịa, superphosphate ga-adị mkpa ka e jiri ya mee ihe (otu tablespoon kwa ịwụ nke na-agbachitere mmiri). Otu ohia ga-achọ otu ịwụ mmiri ịwụ. Na oge opupu ihe ubi, ala kwesiri ichikota ya na otutu ihe omimi nke peat ma obu ihe omuma ndi ozo ma tinye ya n'osisi oku.
A ga-achọkwa ọrụ nlekọta. ịchịkwa ohia mgbe niile, iwepụ nke okooko osisi inflorescences na kwachaa nke ị ga na epupụta maka oyi.
Ọ dị mkpa! A ghaghị ilezi anya iji wepụ ihe ndị na-eme okooko osisi n'oge na-adịghị anya, ma ọ bụ, nọgide na ohia, ha nwere ike ịkpalite mmepe nke ọrịa ọrịa..
Na ngwụsị n'oge mgbụsị akwụkwọ, akwụkwọ na ị ga-ebipụ, na-ahapụ hemp 10-15 cm n'ogo.
N'ime ihe isi ike ndị na-azụlite peony nwere ike ịrịa ọrịa na enweghi okooko osisi. Isi ihe kpatara ya, dịka iwu, ịgha ụgha ma ọ bụ ọdịda. Ka anyị hụ ihe nsogbu ndị a nwere ike ịbụ na ha nwere.
Ọdịdị ọrịa nke peonies bụ nchara, isi awọ, ihe mgbanaka.
Mgbasa nke ọrịa mbụ na-enye aka n'ọdụ ụgbọ mmiri, jikọtara ya na mmiri ozuzo. Ọkụ ghari na-akpatakarị ụdị ndị na-eto eto mgbe ha na-abanye na-eto eto. Ọ na-emetụta akwụkwọ, ị ga na okooko osisi. Nke mbụ, a na-eji akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ mee ihe n'okpuru isi ihe. Mgbe e mesịrị, ọ na-agba ọchịchịrị, dị nro ma mesịa daa n'ala.
Ka ịghara ikwe ka ọrịa a na-eme ya, ná mmalite oge opupu ihe ubi, a ga-emeso bushes na ala n'ime oke ọhịa ahụ na ngwakọta Bordeaux (3 lita kwa ohia). I nwekwara ike gbalịa iji ọgwụgwọ ndị mmadụ - ọgwụgwọ na ngwọta garlic (otu shredded isi maka 2 lita mmiri). A ghaghị ime nkedo na oge nke akụrụ na izu abụọ mgbe e mesịrị ọgwụgwọ mbụ.
A njọ ọrịa nke peonies bụ nchara. Gbanwee mgbaàmà ya agaghị aga nke ọma - ọ na-acha aja aja na epupụta, nke, dị ka usoro, na-etolite mgbe okooko. A ghaghi igbutu akwukwo a ma gbaa ya oku. Mgbochi ga-abụ otu ihe ahụ dịka ire ere.
Moses - Ọrịa malitere ịrịa ọrịa. A na egosiputa ya na oghere na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na eriri odo na epupụta. A ghaghị iwepu osisi na-arịa ọrịa ma gbaa ya ọkụ.
Ihe mere na pions anaghị efu okooko nwere ike ịbụ ọtụtụ:
ebe a na-ahutaghi ebe a ga - ebute ala - ohia ga - acho ka a ghagharia ya n'ubi nke kwekorita ya;
na-akụ nnukwu delenok na obere ntụtụ nke mgbọrọgwụ nke na-enweghị ike ịnagide ọrụ ịkụ mkpụrụ Ome. Ị nwere ike idozi nsogbu ahụ site na nkewa ọhụrụ na transplanting ọzọ;
agafe na nkewa - a ghaghị ịghagharị osisi ahụ ma kee ya ihe ọ bụla karịa otu ugboro na anọ ruo afọ ise;
ezighi ezi - oke miri ma ọ bụ oke;
Ohia nwere oge siri ike - a ga - ekewa ya;
ala na-egbuke egbuke;
ezughị njikọ fatịlaịza;
adịghị ike potassium n'ụwa;
isi awọ na-agba agba ma ọ bụ ihu igwe;
enweghị mmiri ọkụ;
emebi ihe mgbọrọgwụ sitere na nematode ma ọ bụ òké - na mbụ, osisi ahụ adịghị edozi ihe ubi;
Osisi ahụ ewerewo ọrịa na-efe efe - a ga-efopụ ya ma kpọọ ya ọkụ.
Peonies "Sarah Bernard" gosipụtara ọtụtụ agba na ụdị. Ndị a ma ama bụ okooko osisi acha uhie uhie na agba ọcha.
Peony "Sarah Bernard Red" na-emepụta obere ntakịrị site na progenitor - ihe dị ka 15 cm n'obosara. Ee, na elu nke ohia anaghị esi karịa 85 cm.
Otú ọ dị, ọ nwere ụdị na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie na ihe dị ụtọ nke na ọ na-adọta mmasị na mbụ. Akwụkwọ nwere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Nke a na ngwakọ a bụ okooko osisi nke etiti oge okooko.
Peony "Sarah Bernard White" na-enye okooko osisi mara mma na-acha ọcha. Ndị buds ya nwere dị iche iche - site na nha anya ka ha yiri roses. Akara nke okooko osisi dị obere - 15-17 cm. Na peduncles na-enwekarị ma ọ bụ atọ buds. Osisi na-agba oge n'oge.
Ọ na-agba na May - June, ogologo na ogologo. Osisi na-eto na nkezi ruo 80-90 cm. Akwụkwọ ndị ahụ dị nha ma nwee agba akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ gbara ọchịchịrị. Peony "Sarah Bernard" na-acha ọcha na-egosi oké hard winter na iguzogide ọtụtụ ọrịa ndị metụtara peony.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ugbu a na ọkwa nke pion, anyị ga-adụ gị ọdụ ka ị ṅaa ntị na "Sarah Bernard". Ahia mara mma, mara mma ohia ga-edozi ebe ọ bụla, ọ ga-enwe obi ụtọ na onye nwe ya nwere ọmarịcha okooko osisi magburu onwe ya maka ihe karịrị afọ iri. Uru ya bara uru na agba agba, unpretentiousness, oké oyi hardiness na ọtụtụ okooko osisi.
Ego ole na otu esi esi esi ọka, gụnyere oyi kpọnwụrụ, oleekwa ihe a ga-esi esi ya?
Esi transplant zamiokulkas n'ụlọ?
Ụzọ aghụghọ nke Muray na-eto eto
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Anyị na-etolite "Saru Bernard" n'ubi ahụ: atụmatụ nke ịkụ na ịchekwa ihe dị iche iche